Ahoana ny fomba hanafarana
Vonona ny hametraka ny kaomiko aho. Inona ny dingana manaraka hataoko?
Misy fomba maromaro hametrahana baiko.
1. Antsoy ny biraon'ny varotra amin'ny +86 0755-84550616.
2. mpivarotra mailaka na Whatsapp.
3. Fomba famandrihana tin, fenoy feno izany ary alefaso imailaka aminay amin'ny sales@bylandcan.com.
Inona avy ireo taratasy fandoavam-bola ekenao?
T / T, Western Union, L / C na Hizaha mialoha raha tsy misy kaonty apetraka.
Inona ny kaomandy farany ambany an'ny Stock Tins?
500 totalin'ny kalina, feno ny isan'ny entana tsirairay izay nofidina ho an'ny kapoaka tsotra tsy misy fanontana.
Inona ny kaomandy farany ambany ho an'ny Tin Tin?
Miankina amin'ny habe sy ny endrin'ny tinitra ny faritry ny habetsany dia 5 000 - 25,000. Ireo entana mitaky fitaovana vaovao dia mitaky farafahakeliny farafahakeliny sy fotoana maharitra. Azafady mba fenoy ny fangatahana tin ho anao na miantso solontenan'ny mpivarotra raha mila fampahalalana manokana momba ny kaomandy kely indrindra azonay. Azafady mba mifandraisa aminay momba ny antsipiriany momba ny fangatahanao manokana.
Izahay dia maniry fanao amam-panao misy ny anaranay eo amboniny. Moa ve zavatra iray mety omen'ny tany ity?
Eny. Amin'ny alàlan'ny tany Afaka manonta ny litera manokana amin'ny vy, ao an-trano, amin'ny fampiasana tsipika fanontana miloko 6 manara-penitra. Manana departemanta Art Services sy Prepress mifangaro tanteraka izahay hitarika ny mpanjifa amin'ny dingana rehetra. Manana fahaizana pirinty nomerika amin'ny habetsahana kely kokoa ihany koa izahay.
Mila can iray somary lava / lehibe kokoa noho ny haben'ny tahiriko aho. Mora ve izany?
Miankina amin'ny fananganana tinitra no ahafahantsika manova ny haavon'ny ankamaroan'ny vina boribory na kanto mora foana miaraka amin'ny fitaovana efa misy ho an'ny lamina manokana. Tins tsy misy siny na sarina dia mitaky fitaovana vaovao ho an'ny fanitsiana habe. Izahay dia manavao hatrany sy mampiasa vola amin'ny teknolojia farany izay hanome safidy bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay.
Izahay dia mila tinitra milanja habe. Afaka Byland Afaka mamokatra habe am-bifotsy 100% habe sy endriny?
Ekipa Byland Can's Engineering dia afaka mamolavola endrika vaovao ho an'ny zavamaniry ao an-trano nomena fotoana sy ny fampiasam-bola ilaina hanamorana ny famokarana mandeha ho azy. Izahay koa dia manome loharanom-baovao avy amin'ny fotodrafitrasa any ampitan-dranomasina rehefa io no vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny land Can dia hanombatombana ny tetikasa hamaritana ny fomba tsara indrindra hiantohana ny fandefasana vokatra avo lenta amin'ny fotoana mety.
Inona ny fotoam-pizahanao mahazatra ho an'ny tinitra manokana?
3-5weeks miaraka amin'ny fitaovana efa misy sy ny kanto misy anao. Miaraka amin'ny fizotrany rehetra eo ambanin'ny tafo iray ka hatrany amin'ny famitana dia afaka manolotra fifehezana izahay ary koa fanalefahana ary fandefasana ara-potoana ho an'ny mpanjifanay.
Hatramin'ny fomba ahoana no tsy maintsy hanafarako hahazoana antoka fa ho tonga ara-potoana ny Tins Custom ho an'ny fialantsasatra?
Mamporisika anao izahay hanomana mialoha araka izay tratra. Ny serasera no lakile! Raha misy fe-potoana tokony hohajaina amin'ny baiko manokana dia ampahafantaro ny solontenan'ny mpivarotra anay ny fizotry ny fotoana. Azontsika atao ny miverina manomboka amin'ny daty fandefasana ary manome fandaharam-potoana amin'ny fahazoana ny baiko mividy, ny sary ary ny fankatoavana ny porofo. Toy ny tetik'asa mahazatra rehetra, ny fanovana dia mety hanemotra ny fandefasana farany ny kaomandinao. Ho an'ny fotoana fitarihana amin'izao fotoana izao mailaka aminay na miantso ny 0755-84550616 ary miresaka amin'ny Representative Sales.
Azo antoka ve ny vata fandrakofana ho an'ny vokatra sakafo? Azontsika atao ve ny mahazo taratasy milaza fa voaro ny sakafo amin'ny vata?
Kitapo haingon-trano dia fonosana ekena ho an'ny vokatra sakafo. Azontsika atao ny manolo-kevitra ny firakotra anatiny ho an'ireo vokatra misy asidra na miorina amin'ny rano ireo. Mampiasa ny inks sy ny coating efa nankatoavin'ny FDA izahay ary afaka manome antontan-taratasy avy amin'ireo mpamatsy anay. Izahay dia voamarina isan-taona avy amin'ny mpanjifa Fortune 500 maro ary voamarina fa mahafeno ny fenitra avo lenta ho an'ireo mpanamboatra fonosana mifandraika amin'ny sakafo. Ny fitaovanay rehetra dia SQF2 voamarina avy amin'ny Safe Quality Food Institute.
Inona ny fotoana itarihanao ny vata fivarotana?
2-3 herinandro arakaraka ny vanim-potoana sy ny fisian'ny fotoana hanafarana anao. Manolo-tena amin'ny fandaharam-pivarotana tahiry iray taona tokoa izahay ho an'ny singa asongadinina rehetra, matetika dia nanao zavatra tsara kokoa noho ny ora notarihanay izahay.
Hatraiza aho no mila manafatra antoka fa hahazo ny lamako ara-potoana amin'ny Fetiben'ny Lohataona ary hahazo ny fako rehetra?
Manentana anao izahay hanafatra amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra amin'ny ririnina. Na izany aza, raha tsy manafatra amin'ny faran'ny fahavaratra ianao dia tsy midika izany fa tsy hahazo ny volanao ianao. Miasa mameno hatrany ny tahirin'ny tany izahay. Raha mila fanazavana momba ny lisitra manokana mailaka aminay na Call 0755-84550616.
Fandefasana entana & mpitatitra
Ahoana ny fandefasana azy ary inona no ho vidin'ny entana?
Byland dia afaka mandefa amin'ny alàlan'ny mpitatitra mahazatra (LTL / TL). Izahay koa mandefa amin'ny alàlan'ny UPS, DHL ary FEDEX rehefa angatahan'ny mpanjifanay, na izany aza tsy izany foana no safidy tsara indrindra.
Maninona ianao no tsy afaka mandefa ny ampitso?
Byland Can Co. tsy afaka alefa amin'ny rahampitso, noho ny fandaharam-potoana fandefasana ankehitriny. Ny fizarana ara-dalàna nataon'i Byland Can dia 2 herinandro. Izahay, raha azo atao, dia manandrana alefa haingana raha misy tahiry ary avelao ny fandaharam-potoana fandefasana. Amin'ny tranga sasany dia afaka mandefa haingana kokoa ireo mpaninjara antsika.
Nanjono kapoaka izahay. Toa fahasimbana amin'ny famokarana izany. Inona no tokony hataontsika?
Raha nahazo kapoaka izay tsapanao fa misy lesoka amin'ny famokarana dia raiso ireto dingana manaraka ireto.
1. Antsoy ny solontenan'ny varotrao.
2. Mandefasa santionany amin'ny kapoaka. Ireo dia haseho amin'ny departemantan'ny QA anay hanaovana fanadihadiana.
3. Raha vantany vao nanadihady momba ny fahasimbana ny departemantan'ny QA anay, dia hiantso ny solontenan'ny varotrao hiresaka ny valiny.
Toa fahasimbana amin'ny entana izany. Inona no tokony hataontsika?
Raha nahazo kapoaka izay tsapanao fa simba ny entanao dia araho ireto dingana manaraka ireto.
1. Manaova fanamarihana ny fahasimbana rehetra mivantana amin'ny Volavolan-dalàna na amin'ny endrika fanimbana UPS na FEDEX. Raha tsy manao ireo naoty ireo ianao dia mety tsy afaka mametraka fangatahana noho ny fahasimbana.
2. Antsoy ny mpitatitra mandefa hametraka fitakiana. Tokony halefan'izy ireo alefa any aminao ny kopian'ny takelaka takiana mba ho fenoina sy halefa any ivelany.
Tsy azoko daholo ny kapoaka nandidy. Handefa ny ambiny amin'ny fandefasana entana any aoriana ve aho?
Miankina amin'ny fotoan'ny taona, ny endrika rehetra na ny habe nanafatrao dia mety ho ao anaty tahiry na tsia. Raha tsy nahazo ny kalina rehetra tamin'ny kaomandinao ianao:
1. Hamarino ny lisitry ny fonosana hahitana raha naverina baikoina ny kalina.
2.Raha efa tafaverina baiko ireo entana tsy hita, dia halefa aminao ny ambin'ny vatanao raha vantany vao misy izy ireo. Raha tsy maniry ny handray ny kapoaka voaverina farany ianao dia mila miantso ny solontenan'ny varotrao hanafoana ny fifandanjana.
3. Raha toa ka tsy aseho ny lisitra fonosana ireto entana ireto dia miverina, miantso ny solontenan'ny varotrao ary ho faly izy ireo hahafantatra ny antony tsy nahazoanao ny baiko feno.
Iza no tsara kokoa ny manangona na ny entana alefa mialoha?
Ireto ambany ireto ny fahasamihafana misy eo amin'ny karama mialoha sy karama.
1. Manangona fandefasana: Ny fandoavam-bola ho an'ny entana dia aterina rehefa alefa ny entana. Mila omena ny mpamily alohan'ny hamoahana ny kaomandinao.
2. Ny entana alohan'ny karama: Ny orinasa Byland Can dia hanampy ny fakon'ny entana amin'ny faktioranao. Misy sarany fikirakirana ampiharina amin'ny baiko.
3. Ny Byland Can dia afaka manangona sy manangona sy miasa mialoha ny fandoavam-bola FOB Factory, tsy misy ankanavaka.
Inona no dikan'ny FOB?
Ny FOB dia midika hoe Freight On Board. Midika izany fa ny fananan'ny mpitatitra entana dia lasa fananan'ny mpanjifa amin'ny fotoana andaozany ny teboka FOB. Ny fitakiana rehetra momba ny fahasimban'ny entana dia tsy maintsy nofenoina ny mpitatitra, tsy misy ankanavaka.
Mandefa COD ve ianao?
Amin'ny alàlan'ny tany Can dia tsy mandefa COD.